PP Hollow Grid ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း - တရုတ် Qingdao Xinquan ပလတ်စတစ်
PP Hollow Grid ဘုတ်အဖွဲ့စက်အကြောင်း 1. :
ဒါကထုတ်လုပ်မှုလိုင်း PP ဆွန်းဇယားကွက်စာရွက်လိုင်းထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ 2-14mm: PP စာရွက် width ကို 1220-2100mm, အထူပြီးလေ၏။
Extruder: အထူးအပေါက်တွေ type ကိုဒီဇိုင်း, ပလတ်စတစ် extrusion အတွက်ပလပ်စတစ်အသံနဲ့ High-အထွက်နှုန်းတည်ငြိမ်ရေးသေချာစေရန် PLC အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အကြရပြီ။
မျက်နှာပြင် Changer: optional ကိုဟိုက်ဒရောလစ်အမြန် changer ကိရိယာကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ထိထိရောက်ရောက်ကွန်ယက်ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့၏ဒါမှလုပ်ငန်းစဉ်; duplex နှင့်အထူးတံဆိပ်ခတ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ကွန်ယက်ကို device များအတွက်တည်ငြိမ်ရေး။
မှို: မှိုဟာအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ Device ကိုမြင့်မားလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်အလွိုင်းသံမဏိလုပ်, ဒါကြောင့်သေဆုံးဖိအားအတွက်ပစ္စည်းစီးဆင်းမှု၏ဖြန့်ဖြူးယူနီဖောင်းဖြစ်၏ သေဆုံး၏အထက်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းနှုတ်ခမ်း, differential ကိုစည်းမျဉ်းသည်ထိပ်တန်းကနေအောက်ဆုံးတစ်ယူနီဖောင်းအထူသေချာ။
: ရပ်တည်ချက်ဖွဲ့စည်းလေဟာနယ် ဖွဲ့စည်းသည့်စနစ်အစာရှောင်ရာအပူလဲလှယ်အအေးစနစ်နှင့်လေဟာနယ်စနစ်, စာရွက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်၏တိကျမှန်ကန်မှုအတွက်အာမခံဖို့ထိရောက်သောတိမ်းယိမ်း sequential ဖြန့်ဖြူးအတူ။
လေဟာနယ်စနစ်, သုံးကွင်းဆက်လေဟာနယ်လိုင်းများတစ် fixed အရေအတွက်ကိုတပ်ဆင်ထားတစ်ဦးချင်းစီ subsystem သို့နှစ်ခုလွတ်လပ်သောခွဲဖွဲ့စည်းပုံပါဝင်ပါသည်တစ်ခုချင်းစီကိုအရှင်လေဟာနယ်ပန်းကန်ယူနီဖောင်း၏မျက်နှာပြင်အောင်, အလေဟာနယ်-အေးစက်စနစ်နှင့်လေဟာနယ် display ကိုစနစ်ကနှစ်ဦးစလုံး၏ပုံသေသံသရာတင်ဆောင်ခြင်းနှင့် တည်ငြိမ်။
2. ပင်မနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ parameter သည်။
extruder ၏မော်ဒယ် PP SJ-100/35 PP SJ-120/35 -SJ150 / 35
အဓိကမော်တာ၏ပါဝါကို 75KW 110-132KW
ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ width 1300-1600mm 1600-2600mm
ကုန်ပစ္စည်းအထူ 2-10mm 2-10mm
PP Hollow Grid ဘုတ်အဖွဲ့ 3. လျှောက်လွှာ
* အဆိုပါ PP ဆွန်းဇယားကွက်ဘုတ်အဖွဲ့ကြောင့်အလင်းအလေးချိန်မြင့်မားဇွဲ, damp သက်သေပြ, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာစှမျးဆောငျရညျနှင့်အလယ်တန်းအပြောင်းအလဲနဲ့၎င်း၏အားသာချက်များရန်, etc, ဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ pallet ကျောထောက်နောက်ခံ, ဘုတ်အဖွဲ့တန်းစီ, လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အမှု, ထုပ်ပိုးမှု clapboard သို့လုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်စတာတွေဟာအီလက်ထရွန်, အိမ်သူအိမ်သားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ, ထုပ်ပိုး, စက်ပစ္စည်း, စာတိုက်, အစားအစာ, ဆေးဝါး, ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ကြော်ငြာအလှဆင်, ကဲ့သို့သောနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသည်
ယခင်: PC ကို Hollow Grid ဘုတ်အဖွဲ့ / စာရွက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
နောက်တစ်ခု: အသေးစား caliber Flexible ပိုက် & ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Tube ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း